Warfaafin mise Sirfaafin – Goobjoog News
Warfaafin mise Sirfaafin
in cartoontoday, Faallo
Weerar marka uu dhaco inta badan dhinaca weerarka soo qaaday xaruntiisa howlgalku waxay leedahay qaab ay ula xiriirto shakhsiyaadka faltanka ku jira. Telefoon ama hab kale ayay adeegsadaan si ay u kala warqaataan, talana isugu biiriyaan sida ay wax u dheceen iyo marba meesha ay xaaladdu mareyso.
Xaruntu waxay xuuraansataa idaacadaha iyo baraha internetka gaar ahaan baraha bulshada. Waxay ka eegtaa xog hor leh oo talo ku kordhin karta una sahli karta in ay yoolkooda gaaraan.
Xataa haddii la sheego ciidanka dagaalka gelaya midka uu yahay, waxaa laga yaabaa in magaciisa keliya laga fahmo hubkiisa iyo tabtiisa.
Waxaan jecelahay in aan akhristayaasha la wadaago qaar ka mid ah casharrada laga baran karo weerarkii shalay ee Hotel Maka iyo khaladdaadka ay saxaafaddu gashay ee laga yaabo in ay khatar gelin karaan naf bani’aadam.
Dhanka kale, waxaan arkayay saxaafadda qaar oo shalay galab soo qoray in weerarkii la soo afjaray. Taas oo khalad ahayd.
Bal qiyaas qofka qolkiisa ama meel kale ku dhuumanayay ee haysta internet ee rumeysta in weerarka la soo afjaray. Maxaa markaas la gudboon? Dabcan dibadda ayuu u soo baxayaa. Waxa ku xiga ilama aha in qofkii warka khaldan soo qoray uu sidaa ku talo galkiisu ahaa.
Dhanka kale, qofka telefoonka haysta haddii booliiska gurmadka ahi ay ka soo wici lahaayeen si ay ugu gurmadaan, sow ma dhici karto in uu telefoonku mashquul ku yahay wicitaankaaga wardoonka ah?
Ugu dambeyntii, haddii aad ogaato qof ku dhintay goobta, waxaa habboon in sawirkiisa iyo magaciisa midna aanad markiiba soo gelin saxaafadda. Waxaa ka habboon in horta aad wargeliso ehelkiisa ama aad ka dhowrsato daabacaadda ilaa ay cid kale wargelineyso ehelka marxuumka.
Ciidamada Dowladda Federaalka Iyo Kuwa Al-shabaab Oo Ku Dagaallamay Gobalka Hiiraan
Faah Faahin:- Safarka Madaxweyne Xasan Sheekh Uu Ku Tagay Magaalada Kismaayo (Sawirro)
Soomaalida Yemen Oo Xaalad Adag Soo Wajahday